University of Lubeck - Get Higher Education in Germany, iYurophu
isixeko : iLübeck
abafundi (nama.) : 4000
Musa ukulibala ukuba discuss University of Lubeck
in 1973, the University of Lubeck became an independent scientific institution in the state of Schleswig-Holstein. Siza kuqhuba iinkqubo isidanga amayeza, ubunzululwazi bekhompyutha, zobunjineli, kunye nenzululwazi ngezobugqi. Iinkqubo ezahlukeneyo yinkolelo nenzululwazi ngezobugqi, ubunzululwazi bekhompyutha, namayeza unikele kunye-ukuya-umhla imfundo isekelwe umgangatho uphezulu lwempilo. Iimeko apha ekuphuhliseni nokusebenzisa ubugcisa ezintsha, zokukhangela, kwaye unyango elungele, ngenxa neqela phakathi amandla, and collaboration with other institutions in Lübeck, yoPhando Center Borstel, Medical Laser Centre, nakumashishini asekuhlaleni. Babambisene-up kunye namaziko ophando yesizwe neyamazwe ngamazwe lukhuthaza umgangatho wophando yethu kwiyunivesithi, okwangoku kuchaziwe amasimi ababini abakhethekileyo yophando.
Xa kuthelekiswa nezinye iiyunivesithi, kwiYunivesithi Lubeck lincinane, nje 3,400 abafundi - kodwa likwaziqhayisa ratio olungileyo ngutitshala-umfundi. I Ubume aphakamileyo abafundi bethu kwinzululwazi yekhompyutha namayeza sibethelela umgangatho ophezulu yokufundisa yethu nemfundo.
Liqinisekiswa ukuzimela kwayo ngurhulumente. Oku kufuna ukuba self-ulawulo, yenza uphando obalaseleyo kumazwe ngamazwe, ngokubonelela ngemfundo benyanzelisa, ngokukhuthaza izifundiswa abatsha, nokuqinisekisa nabaqeqeshwe ngokufanelekileyo. Thina ukuphumeza ezi njongo ngeenkqubo ezixuba ebandakanya lani amayeza, nenzululwazi ngezobugqi, kunye nenzululwazi computer / zobunjineli.
Sibonelela unonophelo ngokupheleleyo-nkonzo ukuba izigulane kwikliniki yethu.
kunye namalungu ayo ezinxulumene kunye namaziko:
Ukuqhuba uphando ezintsha kunye nolwazi-iqhutywa olusisiseko kunye uluhlu olubanzi izicelo;
Ukuhambisa elizintlontlobo, phambili, imfundo uphando-olusekelwe ibisekelwe kwithiyori, ngendlela ecwangcisiweyo yaye didactically zicwangciseke kakuhle ukwakha ibhulorho kwihlabathi lokwenene, kwaye kwakhona ezi rhoqo;
Phuthumani utshintsho yayixakekile kwaye oqhubekekayo zonke iinkqubo abanesidanga semesters, ukwenzela ukwenza nokuphucula imfundo ezintsha;
Uksuebenzisana amaziko ophando kunye namashishini zasekhaya ngamazwe, ingakumbi abo olusekelwe kummandla;
Ngaba kuzwelonke nakumazwe elihlenga kunye nokhuphiswano;
Cwangcisa ngenkathalo ikamva ngokuthi kwandiswe yunivesithi, amandla ayo kunye neklinikhi, ekuqaqambiseni ukubaluleka kwabo;
Ukuqinisekisa migangatho iphezulu ezisemgangathweni kuzo zonke iinkonzo;
Kuma ukuze ukunyamezelana intsebenziswano uxanduva phakathi onke amaqela idyunivesithi imigaqo ukulingana, ingakumbi phakathi kwamadoda nabafazi, uze wenze iinzame ukufezekisa ezi;
Ukukhuthaza amalungu ukuba bathathe uxanduva;
Yenza umoya pro-ntsapho sikhokelo kukungqinelanisa ngcono imfundo bekuthi ubomi bentsapho;
Mthetho ngendlela uxanduva, oqoqosho, kunye nangendlela esemgangathweni ukusebenzisa izixhobo wayinikela kubo ngononophelo kwaye ngendlela bume-friendly.
emva 1945 City Hospital East
3. EyeNkanga 1964 Academy of Medicine of Lübeck (2nd Faculty of Medicine of the Christian Albrechts University of Kiel), clinical semester for the medicine degree programme
7. UCanzibe 1973 Medical School of Lübeck
10. UCanzibe 1985 Medical University of Lübeck
Uyafuna discuss University of Lubeck ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
University of Lubeck iLübeck